संसारमा भएका जतिपनि परिवर्तन छन् ती सबै कलमकै माध्मबाट भएका छन्ः साहित्यकार ज्ञवाली – Palpa Samachar
साहित्य सिर्जना र साहित्यमा रुचि राख्ने ज्ञवालीसंग साहित्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका साथै नेपाली साहित्यले पुर्याएको योगदानका बारेमा पाल्पा समाचारपत्र साप्ताहिकका लागि नवराज ज्ञवालीले तयार गरेको कुराकानीको सांरसः–
साहित्यकारहरु अन्य ब्यक्तित्व भन्दा प्रकृति र वातावरणबाट प्रभावित भई देशकाल, परिस्थितिसंगै रहेर वर्तमानमा घटित घटनाका आधारमा रहेर आफ्ना सिर्जना र अभिव्यक्त विचारलाई बाहिर ल्याउने गरेको पाइन्छ नि हैन र ?
सबै मानिसहरूको ब्यक्तित्व वातावरणले नै प्रभाव पार्दछ । मानिस परिस्थितिकै दास र मालिक दुबै हुन्छ । म पनि त्यो भन्दा फरक हुन सक्दिन । फरक के छ भने व्यक्तिपरक, आत्मपरक, विषयपरक भावपरक ,सर्बहितपरक आदि छन् । हरेक मानिसलाई प्रकृति र वातावरणले सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । सकारात्मक सोचले मालिक बनाउछ भने नकारात्मकताले दास बनाउदछ । तिनै प्रभावका शक्तिहरुबाट अंकुरित हुदै सिर्जना, विचारहरू सिर्जित हुदै जान्छन् ।
संसारमा भएका जति पनि परिवर्तन छन् ती सबै कलमकै माध्यमबाट भएका छन् । जहाँ कला, साहित्य, संस्कृतिलाई महŒव दिइन्छ त्यहाँ सकारात्मक परिवर्तनहरू सम्भव हुन्छ । साहित्यकारहरूमा कलमको मोह हुन्छ । साहित्यकारले सभ्य समाजको परिकल्पना गरेका हुन्छन् । साहित्यले युगीन चेतनाको गीत घन्काएको हुन्छ । गीत, संगीत, रचना र सिर्जनाले सवैको मन छुन्छ । यसको प्रभाव पाठकले जसरी ग्रहण गर्छ त्यसरी नै आश्वादन गर्दछ ।
. नेपाली साहित्यमा वर्गभेदी विभाजन भएको पाईन्छ यस्तो अवस्थामा साहित्यलाई प्रगतिशिल, अप्रगतिशिल भनिरहनुभन्दा साहित्यकारहरुले नै विद्धताको आधारमा सिर्जना गरे भयो नि ! यसमा कसैको आपत्ति रहन्छ र ?
वर्गभेदमा अल्झाइन्छ भने कसरी साहित्यकारहरु सर्वहितकारी हुन सक्लान त?
साहित्य समाज परिवर्तनको एउटा माध्यम त हो नै तापनि यो नै सम्पूर्ण हो भन्न मिलेन तर पनि परम्परागतमा रहेका यहाँका राजनीतिक दल र राजनीति नै बेठिक हो भने तपाइको विचारमा यसको समाधान के हो त ?
साहित्यमा वौद्धिकताको आधारमा आएका विचार वा सिर्जनाले आम पाठकको मनलाई कसरी छुने र ती रचित भई आएका सिर्जना र व्यक्त भएको भाव विचारलाई आम पाठकले कसरी लिने ?
.यी संस्थागत समस्या र चुनौतिलाई चिर्न यहाँले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ ?
वास्तवमा कृति जन्माउन त्यति सजिलो छैन । प्रसब वेदनाबाटै जन्मिने हो । कुनै समयको लहर यस्तो थियो सबैतिर छन्द कविताको मोह देखिन्थ्यो । अहिले पनि महŒव छ तर आख्यानको तुलनामा कम छ भनौ । मुनामदन सबैको मनभित्र बसेकै छ । पाठकको मन छुने कृति नै पठनीय संग्रहणीय हुन्छ । नेपाली भाषा—साहित्यको क्षेत्र विशाल, ब्यापक एवं गहन छ । नेपाली साहित्यमा सबै विधाको महŒव उत्तिकै छ । समयले कुनै विधा कम र कुनै बढी बनाएको मात्रै हो । अर्कोतिर आज पनि कतिपय स्रष्टाका मूल्यवान् कृतिहरु ओझेलमै छन् । कतिपय सामान्यले पनि चर्चा पाएका छन् । मानिसको परम एवं चरम लक्ष्य सुख शान्ति वा आनन्द प्राप्त गर्नु हो । मानिसले गर्ने सुन्दर कर्मले नै सौम्य जीवन प्राप्त हुन्छ । पाठकको रोजाई पनि यसैभित्र पर्दछ ।
मेरा विचार, गन्थन राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हजुरलाई लाखौ लाख धन्यवाद छ ।पाल्पा समाचारपत्र साप्ताहिक पत्रिकामा स्थान दिनु भएकोमा सम्पादक लगायत सबै टिमलाई धन्यवाद । सुशासन ,नियमितता,संयमता र सभ्य समाजको स्थापनाका लागि साहित्यकारको कलम चल्नुपर्छ । साहित्यकारहरुले दिन दिन सिक्नुपर्छ ।सहि मूल्याङ्न राज्यले वा समाजले जिउदैमा गर्नुपर्छ । मरेपछि हुने प्रशंसाको कुनै मूल्य हुदैन । राजनीति कलरका आधारमा राम्रो नराम्रो छुट्याउने प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्छ ।
बगनासकाली साहित्य परिषदमा स्नेह मिलनसहित लघु गोष्ठी